Jeju Aloe Face Body Care Set 55Ml – SUNNY eSTORE
Jeju Aloe Face Body Care Set 55Ml
Holika HolikaSKU: 8806334361440
Holika Holika Aloe 99% soothing gel ကို သဘာဝစစ်စစ်ရှားစောင်လပတ် 99% ပါဝင်တာကြောင့် ရာသီဥတုမရွေး အသက်အရွယ်မရွေးအားလုံးသုံးလို့ရပြီး Aloe gel တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ခေါင်းစ ခြေအဆုံး သုံးလို့ရသောကြောင့် အလွန်အသုံးတည့်သော ကုန်ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
Holika Holika Aloe 99% Cleansing Foam သည် သဘာဝစစ်စစ်ရှားစောင်လပတ် 99% ပါဝင်တာကြောင့် ရာသီဥတုမရွေး အသက်ရွယ်မရွေးအားလုံးသုံးလို့ရပြီး မျက်နှာပြင်အတွက် လိုအပ်သော ရေဓါတ်ကို ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ အသားအရေ ညစ်နွမ်းခြင်း၊ မညီညာခြင်းများကို သက်သာစေပြီး ကြည်လင်ဝင်းပ စိုပြေလာစေပါသည်။ မိတ်ကပ်နှင့် အညစ်အကြေးများကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
Holika Holika Aloe 92% Shower Gel သည် သဘာဝရှားစောင်းအနှစ် 92% ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေအား ကြည်လင်သန့်ရှင်းစေသော ရေချိုးဆပ်ပြာရည် ဖြစ်ပါသည်။ အသားအရေအတွက် လိုအပ်သောရေဓါတ်ကို အမြင့်ဆုံးပေးစွမ်းနိုင်ပြီး နှုးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။
A travel size trio set of Aloe Vera bath & body products.
Going away but still want to take your favourite Aloe Vera products? We’ve got you covered with the Holika Holika Jeju Aloe Face And Boydcare Travel Set. Containingamoisturising gel, shower gel and cleansing foam, you’ll have everything you need to keep skin cleansed and hydrated, no matter where you are. Going somewhere hot? Aloe Vera helps to soothe skin after it’s been in the sun.
Set contains: - Aloe 99% Soothing Gel 55ml - Aloe 92% Shower Gel 55ml - Aloe 99% Cleansing Foam 55ml